ဥရောပအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ – အချစ်ကိုရှာပါ & ဥရောပ၌အိမ်ထောင်ရေး
အကောင်းဆုံးဥရောပချိန်းတွေ့ရာဆိုက်လမ်းညွှန်ကို download လုပ်ပါ
အကြံပြုချက်! ကိုသုံးပါ အခမဲ့ Google Translator Tool ကို ဒတ်ခ်ျကဲ့သို့အခြားဘာသာစကားများဖြင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရန်, ဂျာမန်, ပြင်သစ်, စပိန်စသည်.
အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပအမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ချိန်းတွေ့လိုပါကမှတ်ပုံတင်ရန်အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များအတွက်ဤစာရင်းကိုအသုံးပြုပါ.
ဟော်လန်မှအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့ဆုံပါ (နယ်သာလန်), ဂျာမနီ, ပြင်သစ်, စပိန်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ပေါ်တူဂီ, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (အင်္ဂလန်), အီတလီ, လူဇင်ဘတ်, နော်ဝေး, ဆွီဒင်နိုင်ငံ, ဒိန်းမတ်, နှင့်အိုင်ယာလန်.
နာမကိုအမှီအကြံပြုထားသည်, ဤဆိုဒ်များသည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုပြင်ပ၌ကိစ္စတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်, သို့မဟုတ်သူတို့ကမည်သည့်ကြိုးမျှမပါဘဲချိန်းတွေ့လိုကြသည်.
အကြီးတန်းချိန်းတွေ့ခြင်း (ပြည်သူ့အတွက် 40)
ဆက်ဆံရေးအသစ် (ကျော်များအတွက်နယူးဆက်ဆံရေး 40)
အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပမှသူဌေးအမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံလိုလျှင်ဤသည်မှာအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်.
Buddy နောက်ထပ်ပွဲစဉ် (အဝလွန်လူများအတွက်ချိန်းတွေ့)
အခမဲ့ဥရောပချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များလမ်းညွှန်ကို download လုပ်ပါ
Dating4ALL နိုင်ငံတကာအရသာရှိသောဒတ်ချ်ချိန်းတွေ့ site တစ်ခုသည်အရသာအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်သည်:
အရွယ်ရောက်သူ / လိင်ချိန်းတွေ့ခြင်း
ဒတ်ခ်ျတွင်ရရှိနိုင်, အင်္ဂလိပ်, စပိန်ဘာသာစကား. ပိုလန်, ပြင်သစ်နှင့်များစွာသောအခြားဘာသာစကားများ.
သင်၏မိတ်ဖက်အသစ်ကို Dating4ALL တွင်ရှာပါ >>
သင်သည်လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံလိုလျှင်, သင်၏ဘဝကိုသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေး၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာပါ, သင်၌ငွေမရှိ, ထို့နောက်သိသာကအခမဲ့အွန်လိုင်း datingsite ဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
သို့သျောလညျး, အများဆုံး, အားလုံးမဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ကန့်သတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမပူဇော်လျှင်.
စာရင်းတစ်ခုကြည့်ရန် အကောင်းဆုံးကိုဥရောပချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များ, ကြည့်ရှုပါ ဒီစာမျက်နှာ အခမဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရန်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်.
အကောင်းဆုံး All-ပတ်ပတ်လည်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, လုံခြုံပြီးကောင်းစွာသိကြက်ဘ်ဆိုက်များ OKCupid များမှာ, PlentyOfFish (Pof), Match.com နှင့် eHarmony အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့.
ဒါပေါ့, Tinder လို့ခေါ်တဲ့အလွန်ရေပန်းစားအခမဲ့ app ကိုလည်းဖွင့်.
သငျသညျသစ်တစ်ခုမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေလိုပါက, ကြားဆက်ဆံရေး, အချစ်, မိန်းမကလေး, ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီး, ထို့နောက်အလေးအနက်ထားဆက်ဆံပါ.
သင်ကအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့တဲ့ဆိုက်တစ်ခုအတွက်ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းမှုအတွက်ငွေအနည်းငယ်ပေးဖို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမိုက်မဲတယ်လို့မထင်ပါဘူး။, ဒါပေမယ့်သင်ထွက်သွားနိုင်ဖို့တတ်နိုင်တယ်, လက်ဆောင်များဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ခြင်းအတွက်ပိုက်ဆံများစွာသုံးပါ?
ZoekEenDate.nl တွင်ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်aကိုပြုစုခဲ့သည် အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များစာရင်း နယ်သာလန်၌, မှတ်ပုံတင်ရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သောဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်အနောက်ဥရောပ.
ဒီဆိုဒ်အများစုမှာအခမဲ့ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, ဒါပေမယ့်အကောင်းတစ်က start ပါပဲ.
သတိရပါ, အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အသင်း ၀ င်အတွက်ပေးဆပ်ရန်အမှန်တကယ်ပြင်ဆင်ထားပါက, ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပိုမိုလေးနက်သည်ဟုဆိုလျှင်ထို site ပေါ်တွင်လည်းလေးနက်သောလူများကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်, သူတို့လည်းသူတို့အဘို့အပေးဆောင်ကြပြီအဖြစ်.
လုံးဝအခမဲ့ site တစ်ခုတွင်သင်မည်သည့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတွေ့ဆုံနိုင်မည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ?
ကောင်းမွန်သော site တစ်ခုအတွက်ပိုက်ဆံအချို့ပေးဆပ်ရန်ပြင်ဆင်ထားခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်, ဒါပေမယ့်တောင်မှသင်စွန့်စားမှု run.
ထုံးစံအတိုင်း, ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်လွန်းကောင်းသောအသံလျှင်, ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်.
သူတို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအလွန်လျှင်မြန်စွာစတင်ပါက, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသင့်ကိုချီးမွမ်းပေးတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကမင်းကိုအရမ်းမြန်မြန်ချစ်တယ်လို့ပြောတယ်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းမကောင်းတဲ့လူတစ်ကြောင်းအမှု၌ဒီတော့ဒီစစ်မှန်သောအသက်တာ၌ဖြစ်ပျက်ပါဘူး.
သင်တို့အပေါ်မှာရှာတှေ့နိုငျအများအပြားအတွေ့အကြုံများနှင့်အဖြေကိုအကြောင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ A ကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ် Reddit.
ကူပွန်နှင့်အတူငွေကို Save, လျှော့စျေးနဲ့အပေးအယူများ
တစ်ဘို့အောက်ကစာမျက်နှာကိုကြည့်ဖူး updated စာရင်း အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အပေးအယူများ၏.
ဒီစာမျက်နှာ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်သွင်းပြီးနယ်သာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ခြင်းဆိုဒ်များအားလုံး၏နောက်ဆုံးစာရင်းကိုရယူရန်အတွက်သင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သောအခမဲ့ eBook wat ကိုရရှိနိုင်သည်။, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဂျာမနီ, ပြင်သစ်, စပိန်, အီတလီ, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း.
ဒါဆိုဥရောပကယောက်ျားတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်မိန်းမနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်, ငါသည်ဤစာရင်းကို download လုပ်ပါရန်သင့်အားအလွန်အမင်းအကြံပြုလိုသည်!
ဘယ်ပထမ ဦး ဆုံးပို့မက်ဆေ့ခ်ျကို?
အဲဒါကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားပါ5နှင့် 20 စကားလုံးများ.
အသေးစိတ်များအတွက် UkraineDate ကိုစစ်ဆေးပါ >>
ငါတို့စစ်ဆေးပါ နိုင်ငံတကာချိန်းတွေ့လမ်းညွှန် အင်တာနက်ပေါ်တွင်ယူကရိန်းဆိုရင် single ရှာရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်.
ဟော်လန်တွင်အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ခြင်းဆိုဒ်များကိုရှာပါ, ဤနေရာတွင်ဂျာမနီနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံ >> https://www.zoekeendate.nl/EuropeDating
- ချိန်းတွေ့ရန်ဥရောပ၌တစ် ဦး တည်းရှာပါ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အိမ်ထောင်ရေး
- အချစ်ကိုရှာဖွေနေသည့်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့ဆုံပါ
- Tinder ကဲ့သို့ချိန်းတွေ့သောနေရာများအတွက်အကြံဥာဏ်များ, Lexa, ဆက်ဆံရေးဂြိုလ်, Be2, နင်, OKCupid, PlentyOfFish အများအပြားကပို
- အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ ၀ က်ဆိုက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
- အထွေထွေချိန်းတွေ့, လိင်ချိန်းတွေ့ခြင်း, အရွယ်ရောက်ပြီးသူချိန်းတွေ့, ချိန်းတွေ့ချိန်းတွေ့ခြင်း, bdsm ချိန်းတွေ့, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချိန်းတွေ့, Adultfinder
အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုရှာဖွေရန်ဥရောပ၌အခမဲ့ချိန်းတွေ့သောနေရာများ - အမျိုးသားများရှာဖွေသောအမျိုးသမီးများ - ဥရောပအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုရှာဖွေရန်ဥရောပ၌အခမဲ့ချိန်းတွေ့သောနေရာများ - အမျိုးသားများကိုရှာဖွေသောအမျိုးသမီးများ - ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောနေရာများ
အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုရှာဖွေရန်ဥရောပ၌အခမဲ့ချိန်းတွေ့သောနေရာများ - အမျိုးသမီးများကိုရှာဖွေသောအမျိုးသားများ - ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်
အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုရှာဖွေရန်ဥရောပ၌အခမဲ့ချိန်းတွေ့သောနေရာများ - အမျိုးသားများရှာဖွေသောအမျိုးသမီးများ - ဥရောပအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောနေရာများ
အမျိုးသမီးများနှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုရှာဖွေရန်ဥရောပ၌အခမဲ့ချိန်းတွေ့သောနေရာများ, ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောနေရာများ - အမျိုးသားများကိုရှာဖွေခြင်း
အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုရှာဖွေရန်ဥရောပ၌အခမဲ့ချိန်းတွေ့သောနေရာများ - အမျိုးသမီးများသည်ယောက်ျားများကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောနေရာများ
အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုရှာဖွေရန်ဥရောပ၌အခမဲ့ချိန်းတွေ့သောနေရာများ၊ အမျိုးသားများကိုရှာဖွေသောအမျိုးသမီးများ - ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောနေရာများ
အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုရှာဖွေရန်ဥရောပ၌အခမဲ့ချိန်းတွေ့သောနေရာများ - အမျိုးသမီးများကိုရှာဖွေသောအမျိုးသားများ - ဥရောပအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောနေရာများ - အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုရှာဖွေရန်ဥရောပ၌အခမဲ့ချိန်းတွေ့သောနေရာများ
အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးအတွက်ဥရောပ၌အခမဲ့ချိန်းတွေ့ခြင်း - အမျိုးသားများရှာဖွေနေသည့်အမျိုးသမီးများ - ဥရောပ၏အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောနေရာများ
အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုရှာဖွေရန်အခမဲ့ဥရောပချိန်းတွေ့သောနေရာများ - အမျိုးသားများရှာဖွေသောအမျိုးသမီးများ - ဥရောပအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောနေရာများ
ဥရောပ၌အခမဲ့ချိန်းတွေ့သောနေရာများ၊ အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုရှာဖွေရန်အမျိုးသမီးများ - ယောက်ျားများအတွက်အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောနေရာများဥရောပ
Amy Webb မှအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းကိုငါဘယ်လို Hack သလဲ
သူမကြိုက်သည့်ရက်စွဲများကသူမကိုမရေးခဲ့ပါ, နှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းကိုပုရစ်ဆွဲဆောင် (နှင့်ပိုဆိုး).
ဒီတော့, အချက်အလက်မဆိုပန်ကာလုပ်လိမ့်မယ်အဖြစ်: သူမ spreadsheet ကိုစတင်ခဲ့သည်.
သူမစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုဖြင့်သူမ၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မှုဘဝကိုသူမဘယ်လို hack သွားလဲဆိုတဲ့ပုံပြင်ကိုနားထောင်ပါ, ရယ်စရာနှင့်ဘဝ - ပြောင်းလဲနေတဲ့ရလဒ်များကို.
TEDTalks သည် TED ညီလာခံမှပြုလုပ်သောအကောင်းဆုံးဆွေးနွေးမှုများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲများ၏နေ့စဉ်ဗွီဒီယို podcast ဖြစ်သည်, ဘယ်မှာကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်တွေးခေါ်နှင့်အကျင့်ကိုကျင့်သူတို့၏ဘဝ၏ဟောပြောချက်ပေးဘယ်မှာ 18 မိနစ်များ (ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း).
နည်းပညာဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများကိုရှာဖွေပါ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဒီဇိုင်း - အပေါင်းသိပ္ပံ, စီးပွားရေး, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြissuesနာများ, အနုပညာနှင့်အများကြီးပို.
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် Datingsite Tool ကိုရွေးချယ်ပါ
အိမ်သို့ ZoekEenDate.nl သို့ပြန်သွားရန်